PostmarketOS 21.06 inosvika iine rumwe rutsigiro rwechigadzirwa, kugadzirisa uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro nyowani ye postmarketOS 21.06 yakaziviswa umo sIwe waita iyo system base kusimudzira kuAlpine Linux 3.14, zvakare iyo kernel yakagadziridzwa uye, pamusoro pezvose, kuenderana portfolio yemidziyo inotsigirwa zviri pamutemo yakawedzerwa.
Kune avo vasingazive nezve PostmarketOS vanofanirwa kuziva kuti uku kugoverwa kweLinux kuri yemahara uye yakavhurwa sosi software inoshanda sisitimu iri kusimudzirwa kunyanya kune mafoni uye mahwendefa, zvichibva paAlpine Linux, Musl uye BusyBox. Chinangwa cheprojekti ndechekupa mukana wekushandisa kitambo chekuparadzira cheLinux pane smartphone, iyo isingatsamiri pahupenyu hweiyo yepamutemo rutsigiro firmware uye haina kusungirirwa kune zvakajairwa mhinduro dzevakuru maindasitiri vatambi vanogadzira budiriro. vector.
Iyo postmarketOS nharaunda yakabatana zvakanyanya sezvinobvira uye inounza pamwe zvese zvishandiso zvakasarudzika zvikamu mupakeji yakaparadzana, mamwe ese mapakeji akafanana kune ese zvishandiso uye akavakirwa paAlpine Linux mapakeji.
Mukuumbwa, pese pazvinogoneka iyo vanilla linux kernel inoshandiswa uye kana izvi zvisingaite, firmware kernels yakagadzirirwa nevekugadzira michina inoshandiswa, pamwe neKDE Plasma Mobile inopihwa seyakanyanya tsika makanda, Phosh, Sxmo, asi zvinokwanisika kuisa dzimwe nharaunda dzinosanganisira GNOME, MATE uye Xfce.
Nhau huru dzePostmarketOS 21.06
Isu tinofara kuzivisa postmarketOS vhezheni v21.06, yakavakirwa paAlpine Linux 3.14! Kana iwe uchinetseka kuti nei zvakaitika mwedzi mitatu mushure mekumisikidzwa kwekupedzisira, chikonzero ndechekuti isu takakwanisa kuteedzera kuvhurwa kweAlpine zvakanyanya nguva ino. Panzvimbo pemwedzi miviri nehafu mushure mekutanga kweAlpine, zvakangotitorera hafu yemwedzi kuti ibudise iyi. Kuburitswa kunotevera kunogona kutarisirwa mwedzi mitanhatu yega kubva zvino, zvichinyatso tevera kuburitswa kweAlpine.
Mune iyi vhezheni nyowani iyo inoratidzwa yePostmarketOS 21.06 sezvatataura iyo system base inoenderana neAlpine Linux 3.14, kunze kwaizvozvo huwandu hwemidziyo inotsigirwa zviri pamutemo nenharaunda hwakawedzera kubva pa11 kusvika pa15 uko michina mitsva yakatsigirwa iri OnePlus 6, OnePlus 6T, Xiaomi Mi Cherechedzo 2 uye Xiaomi Redmi 2.
Pakati pekuchinja kwakaitwa mushanduro iyi nyowani ndiko ese ekushandisa maficha akagadziridzwa kushanduro dzapashure uye madoko ese echishandiso akavandudzwa.
Imwe shanduko yakakosha ndeye mukuvhura midzi ine osk-sdl iyo ikozvino inoremadza kuverenga / kunyora mitsara, kuwedzera kunyora kwekuita pamabhenji akareruka ne ~ 35% uye verenga mashandiro na ~ 33% pamafaera masisitimu ane 4K block saizi, pamwe nezita rekushandisa / password kukurumidza kune Akazvitsaurira SSH mushandisi mune yekumisikidza mudziyo, zvichiita kumisikidza kushomeka.
Iyo kernel yakagadziridzwa iyo iyo PinePhone kuwedzera hupenyu hwebhatiri. Iyo Linux kernel yePine64 zvishandiso yakavakirwa pahwaro hweiyo linux-sunxi chirongwa.
Pane rimwe divi Phosh yakafambiswa nekusarudzika kuPortfolio faira maneja, iyo yakakodzerwa zvakanyanya nenharembozha. Iyo Nemo yakapihwa pamusoro inogona kuiswa kubva kuAlpine Linux repository.
Zvese zvishandiso kunze kweOnePlus 6 / 6T uye Xiaomi Mi Cherechedzo 2, iyo yakatsanangurwa seti yenftables packet yekusefa mitemo inogoneswa nekutadza.
Iyo yakasarudzika yakatemerwa mitemo inobvumidza inouya SSH kubatana kuburikidza neUSB uye Wi-Fi network adapta, pamwe neDHCP zvikumbiro kuburikidza neUSUS adapta.
Hazvichakwanise kuchinjira kune yakamira mimhanzi painoridza, kunyangwe iko iko application kusinga nyatso kuvharidzira kumisikidza kweye screen saver kuburikidza ne inhibit API.
Pane iyo WWAN network interface, chero chinouya chinongedzo chinorambidzwa.
Iye zvino firewall inosanganisirwa, inofambiswa nftables.
Shanduko dzakaitwa kusimudzira kugadzikana kweWi-Fi pane iyo Librem 5 smartphone.
Smart kadhi rutsigiro yakawedzerwa yeLibrem 5.
Zvekubuda zvinobuda zvinobvumidzwa kune ese marudzi enetiweki maficha.
Dzakagadziridzwa shanduro dzese mushandisi maficha.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo kubva postmarketOSOS 21.06, unogona kutarisa ruzivo mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » PostmarketOS 21.06 inosvika iine rumwe rutsigiro rwechigadzirwa, kugadzirisa uye nezvimwe